Home / Blog / Mametraka talantalana eo amin'ny trano fidiovana, miaina 5 metatra toradroa avy hatrany ny fandroana!
2021 / 04 / 11 FisokajianaBlog 4965 0
Fianakaviana maro no manana faritra fandroana kely, azo inoana, koveta sy lozabe no fandroana rehetra. Amin'ny maha-santimetatra ny habaka, mba hiantohana fa ny faritra misy ny hetsika, nefa koa te-hanitatra ny fandroana, fitehirizana tsara, ny fomba tsara indrindra dia ny fampiasana tsara ny 1 ㎡ ambonin'ny trano fidiovana.
1㎡> 3㎡, ambonin'ireo torohevitra fitahirizana trano fidiovana.
Kabine: aza maka toerana, fa koa mba hanomezana fahafaham-po ny filàna fitahirizana.
Fisarahana: ampitomboina ny fampiasana ny habakabaka façade.
Tohatra: na ny artifact fitehirizana na ny haingon-trano.
Fitaratra: manitatra ny habaka amin'ny maso.
Fitehirizana ny kabinetra
Raha tsy manana toerana fitehirizana ao amin'ny trano fidiovana ianao dia afaka mindrana amin'ny rindrina miboridana ao ambadiky ny trano fidiovana.
Ny zavatra voalohany azonao atao dia ny mametraka kabinetra rindrina ao ambadiky ny trano fidiovana hitehirizana azy, ary apetraho ao anatiny ireo trano fidiovana ilaina isan'andro, izay tsy hoe manatsara ny fampiasana ny habaka fotsiny, fa manamora ny fahazoana azy io isan'andro, tonga lafatra!
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny hahazoana antoka fa manana ny hevitra tsara momba ny zavatra ataonao ianao. Ny fanampiana vaovao indrindra amin'ny fanangonana dia ny fanampim-baovao farany amin'ny fanangonana.
Ny zavatra voalohany azonao atao dia ny manandrana ity kabinetra na talantalana tsotra ity, ary mividy ny vokatra vita amin'ny Internet.
Angamba ny kabinetra fitehirizana lehibe dia tsy mety amin'ny tranonao, fa ny mametraka fizarazarana kely dia mety. Izy io dia mahazaka ny lanjan'ny zavatra rehetra, ny lehibe toa ny firavaka maitso, ny kely toy ny tavoahangy fanafody, ny landihazo landihazo sns.
Izy io koa dia fomba tsara iray ahazoanao tombony betsaka amin'ny tranonao. Ny tanjon'ny orinasa dia ny hanomezana tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifany.
Ireo fizarazarana telo etsy ambonin'ny trano fidiovana dia mitahiry toerana sy mitahiry zavatra miaraka amin'izay, izay hevitra 100 azo ampiharina.
Raha heverinao fa misy olana kokoa etsy ambony, dia azonao atao ny misafidy ny mametraka tohatra kely ambonin'ilay trano fidiovana, apetraka amin'ny rindrina, dia tsy handray toerana be loatra, servisy fitehirizana sns dia tena mety.
▲ Azonao atao koa ny manantona harona fitahirizana eo amboniny, efitra fandroana avo ao anaty fitehirizana ary manangona toerana.
Ny fitaratra dia apetraka eo ambonin'ny trano fidiovana ankoatry ny fiasan'ny fampiasana isan'andro, ary ny fiasa fanitarana. Ny fitaratra dia afaka manome taratra, mametaka ary mampitombo ny famirapiratry ny efitrano, mampitombo avo roa heny ny vokatr'ilay toerana.
Ho fanampin'izany dia azonao atao koa ny manambatra ny fitaratra amin'ny fandroana amin'ny fitehirizana anaty mba hiantohana ny hatsaran'ny rindrina ary apetrakao eo ambonin'ny rindrina koa ireo entana.
Jereo ireo tranga etsy ambony ireo, tsy nahatana ny fientanam-po izahay, te hiverina hanadio ny efitranony manokana, maika hanao zavatra hamenoana ny kabine amin'ny metatra toradroa.
Previous :: Ahoana ny fametrahana ny faritra fanasan-damba amin'ny fomba mahomby kokoa? Manomboha amin'ireto lafiny efatra ireto, hahazoana antoka fa tsara sy tsara no ampiasaina! Next: Mihetsiketsika indray ny onja mangatsiaka! Vokatra amin'ny fandroana, Ahoana no hisorohana ny hatsiaka?
2021 / 04 / 12 6603